The University of Rostock bụ otu n'ime German mahadum na a nnọọ iche iche nke na-achị. Ọ na-enye karịa 100 ọmụmụ: 34 imecha ya na okokporo, 56 na a eteufọk ogo, 37 (gụnyere nkụzi) ya na nyocha obodo, na 3 na a Ph.D. Ọzọkwa, na etiti maka ọzụzụ ndị nkuzi na nyocha mmụta abụghị naanị kụziere mmụta nyocha mana ọ na -arụkwa ọrụ n'ịkwalite ogo ọzụzụ ndị nkuzi.
Chọrọ mara ka esi otu n'ime Kasị dị ịrịba ama Universities Na Europe? Bụla direction na ị ejegharị ejegharị si (e.g. Rostock ma ọ bụ Schwerin, Berlin ma ọ bụ Hamburg), na-ụgbọ okporo ruo mgbe i ruo Wismar n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè. site n'ebe a, ị nwere ike enwetaghị a ụgbọ ala ka ụgbọ ala na-akwụsị na J.-R.-Bika-Straße site na iji ahịrị 4 ma ọ bụ G (kwupụta Ostseeblick) ma ọ bụ B-D (kwupụta Seebad Wendorf). Ọ bụ naanị otu ije ije site na bọs a na-agafe gafee ụgbọ ala ogige na Campus.